Vina Fisandratana 2030 : Nampahafantarina tany Moscou -
AccueilRaharaham-pirenenaVina Fisandratana 2030 : Nampahafantarina tany Moscou
Nahaliana ireo mpandraharaha sy mpampiasa vola tao Moscou ny famelabelarana nataon’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina mikasika ny Vina Fisandratana 2030. Tao amin’ny hotel lehibe iray antsoina hoe Golden Ring no nanatontosana ny famelabelarana tamin’iny herinandro iny. Nanatrika ity fihaonana ity ny olo-manan-kanja vahiny mpahay toekarena sy mpandraharaha maro avy ao Moscou tarihin’ny minisitry ny Raharaham-bahiny izay nisolo tena ny Filoha Rosianina Vladimir Poutine. Teo koa ny minisitry ny Fambolena, ary ny minisitry ny Vola sy ny Harena an-kibon’ny tany.
Niompana indrindra tamin’ny lafin’ny toekarena mantsy ity dian’ny delegasiona malagasy tany Russie ity. Niaiky ireo mpandray anjara fa tena tsara ary tokony hotohanana ity Vina Fisandratana 2030 ity, satria voalaza ao daholo ny tetikasa entina hampandrosoana maharitra an’i Madagasikara.
Noraisin’ireo manam-pahaizana ambony ara-toekarena tao amin’ny Oniversiten’ny “Amitié de Peuple” ao Russie koa ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Nandritra izany no nanoloran’izy ireo ny laharam-boninahitra fanomen’ny Oniversité ireo olo-miavaka, ny Docteur Honoris Causa amin’ny “Sciences Economique”. Niampy indray araka izany ny anaram-boninahitra ara-pamendrehana sy ara-pahalalana azon’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Delegasiona niaraka tamin’ny Filoha tamin’izany moa ny minisitra Marcel Benjamina Ramanantsoa ( Mepate) , ny minisitra Ying Vah Zafilahy minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny solika , ny minisitry ny Fambolena sy ny Fiompiana Edmond Randriarimanana, ary ny mpanolotsaina manokana Mbola Rajaonah.